Qarax lala beegsaday ciidanka amniga Boosaaso oo khasaaro gaystay & ciidanka oo hadda ku raadjooga ciddii ka danbaysay. – Radio Daljir
Bossaso, Dec 15- Ugu yaraan 3 ka mid ciidanka ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa dhintay 8 kalana waa ay ku dhaaawameen kadib markii qarax Miino oo lala beegsaday gaari kuwa ciidanka ah oo ay askartaasi saarneeyeen gudaha magaalada Boosaaso.
Ciidanka weerarkaan lala beegsaday ayaa ahaa ciidanka ammaanka magaalada Boosaaso, waxayna xilliga weerarku dhacay oo ahayd 11:30 caweysnimo ay ku guda jireen hawlgallo amni sugid ah oo ay ka samaynayeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso.
Miinadaan oo ahayd nooca gacanta laga hago ayaa lagu aasay meel laamiga dhiniciisa gaar ahaan halka ay deggan tahay shirkadda is-gaarsiinta ee Golis oo ah bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Qaraxaan miino oo ahaa mid aad u xoog badan ayaa burbur weyn ku sameeyey halkii uu ka dhacayey, waxaana khasaaraha ciidanka soo gaaray ka sokow gabi ahaanba burburay gaarigii ay wadeen ciidanka ammaanka ee lala beegsaday qaraxa.
Ma jiraan cid illaa iyo haatan ciidanka ammaanku u soo qabteen falkaasi weerar, hase ahaatee saraakiisha bileysku waxay Daljir u sheegeen in ay wadaan baaritaanno lagu baadi goobayo ciddii ka danbaysay qarax miino lagu laayey ciidanka amniga.
Dhanka kale saraakiisha caafimaadka ee magaalada Boosaaso oo ay idaacadda Daljir wax ka weydiisay xaaladda caafimaad ee askartii ku dhawacantay qaraxii xalay, ayaa sheegay xilligaan xaaladda caafimaad ee askartaasi in ay wanaagsan tahay isla markaana lagu guda jiro la tacaaliddooda.
Ma?ahan markii ugu horraysay oo qarax lala eegto ciidanka ammaanka ee magaalada Boosaaso, hase ahaatee qaraxaani waxaa uu ahaa midkii ugu khasaaraha badnaa eel ala beegsado ciidanka ammaanka.